5 Jimicsiyada wanaagsan ee ka soo horjeeda Sciatica iyo Sciatica (Xanuunka neerfaha ee la gudbiyay)
19 / 06 / 2016 /1 Comment/i tayada Articles, nno dareemayaasha, Jimicsiga iyo Jimicsiga, Jimicsiyada xoog, iskala Layliyo/av waxyeelladayda
Miyaad ku xanuunsataa sciatica iyo xanuunka dareemeyaasha lugta? Halkan waxaa ah 5 jimicsi oo adiga kuu ah ronaanayaa kuwaas oo yareyn kara calaamadaha isla markaana bixin kara horumarin shaqeysa. Jimicsiyadan ayaa si gaar ah loogu talagalay dhaqaajinta, fidinta iyo abaabulka muruqyada iyo qaababka loo yaqaan inay gacan ka geystaan ​​xanuunka 'sciatica'. Adiga oo si joogto ah ugu kordha wareegga dhiigga ee aagga iyo dabacsanaanta kordhay, waxaad marar badan ku guuleysan kartaa astaamaha wanaagsan.
Sciatica waa erey qeexaya xanaaq ama qanjaruufo neerfaha nafsadda - tani waxay u horseedaa xanuun neerfaha oo u dhaadhaca lugta. Dareenka nafsadeed wuxuu ka yimaadaa salka hoose ee dhabarka hoose, ka hor inta uusan u safrin miskaha, kursiga iyo inuu hoos u sii maro lugta - illaa iyo cagaha. Jimicsiga iskala bixinta ka sokow, waxaan sidoo kale kugula talineynaa isticmaalka joogtada ah kubadaha dhibcaha ku kiciya murqaha muruqyada (fiiri tusaalaha halkan - xiriiriye wuxuu ka furaa daaqad cusub).
MUUQAAL (Fiidiyowgaan waxaad ku arki kartaa dhammaan layliyo leh sharraxaad leh):
Fiidiyowgu ma bilaabmin markii aad riixdid? Isku day cusboonaysiinta biraawsarkaaga ama si toos ah uga daaya kanaalkayaga YouTube. Haddii kale xor ayaad u tahay inaad iska qorto kanaalka. Kanaalka waxaad sidoo kale ka heli doontaa layliyo tababar ah tababarka laastikada (sida lagu muujiyey halkan - xiriiriye wuxuu ka furaa daaqad cusub) taasoo si gaar ah faa'iido kuugu yeelan karto dhibaatooyinka miskaha iyo sciatica.
Xusuusnow inaad la qabsato xanuunkaaga, haddii ay ku xanuunsato inaad jimicsiga sameyso markaa waxaad u badan tahay inaadan diyaar u ahayn inaad fidiso illaa iyo inta aad ku celcelinayso - isku day inaad aragto waxa kugu habboon. Jimicsi ku saabsan maaskarada xusulka iyo dabaasha ayaa ah labo layli oo fiican oo aan lahayn saameyn aad uxun - taas oo ka hortageysa xanaaq dheeraad ah dareemayaasha. Dabcan, waxaan kugula talineynaa inaad hesho daaweyn khabiiro marka lagu daro laylisyadaan si aad u wanaagsan.
1. Jilbaha u jeeso dhanka xabadka
2. Jimicsiga abaabulka dareemaha ee 'Sciatica'
Ujeedada layligani waa in la abaabulo dareemahaaga sciatica laftiisa oo xanuun yeelan kara hadaad kujirto marxalad deg deg ah dhibaatada sciatica - tani waa in la sugaa ilaa inta xanaaqa sciatica uu xoogaa gacanta kuhayo. Ku jiifso sagxadda dhabarkaaga dhabarka, iyadoo la doorbidayo sariir tababbar ah oo taageero laga helo qoortaada hoostiisa.
3. Dib u jiifinta wiishka («Cobra»)
4. Qalabka hoardhigga taagan
Ujeedada layligani waa in la fidiyo dhabarka bowdyaha iyo gaar ahaan murqaha muruqyada. Dad badani waxay jimicsi qaldan sameeyaan - maadaama ay moodayaan inaad dhabarkaaga u jeediso dhinaca hore inta aad fidsan tahay, tani waa in la tijaabiyaa oo laga fogaadaa maadaama ay culays badan gudaha ah saarayso discs intervertebral disc (qaababka jilicsan ee u dhexeeya vertebrae).
Istaag istaag oo dhabarka cagaha dhig dhig meel adag, kor u kaca - sida jaranjarooyinka. Lugahaaga toosi adigoo faraha lugaha kala bixinaya ka dibna u leexo ilaa aad ka dareento inuu si fiican u fidayo xagga dambe ee bowdadaada muruqyada. Ku qabo kala-bixinta illaa 20-30 ilbidhiqsi oo ku celi 3 jeer lug kasta.
5. Beenta fiditaanka gluteal
Kuwani waa jimicsiyo wanaagsan oo ay habboon tahay in si joogto ah loo sameeyo saameynta ugu badan - laakiin waxaan ku xusuusinaynaa inay qaadan karto dhowr toddobaad ka hor intaadan bilaabin inaad aragto kala duwanaansho cad oo ku saabsan shaqada muruqyada iyo astaamaha.
Waxay kuxirantahay naftaada iyo xaaladaada caafimaad. Raadi waxa adiga kugu habboon bilowga oo si tartiib ah u dhis laakiin hubaal waa mustaqbalka. Xusuusnow in jimicsigu sababi karo xannib bilowga, maadaama aad si tartiib tartiib ah u burburinayso meelaha dhaawacan (unugyada dhaawaca iyo unugyada nabarrada) waxaadna ku beddelaysaa unug caafimaad oo jilicsan oo shaqeynaya. Tani waxay noqon kartaa waqti qaadasho laakiin hawl aad u fiican.
Haddii aad leedahay cudur ogaansho, waxaan kaa codsaneynaa inaad weydiiso takhtarkaaga haddii jimicsiyadaan waxtar kuu yeelan karaan - si macquul ah iskuday naftaada. Sidaan horeyba u sheegnay, waxaan kugula talineynaa inaad hesho daaweyn firfircoon wixii sababa iyo cillado ah ee muruqyada iyo kala-goysyada kuu horseeday inaad ku dhacdo cudurkaan. Khabiir ku takhasusay muruqyada ayaa kuu sheegi kara jimicsiyada kugu habboon - iyo daaweynta aad u baahan tahay.
Haddii kale, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad guurto oo aad ku lugeyso dhulka qalafsan haddii ay suurtagal tahay.
PAGE xiga: 9 Tilmaamo Hurdo Ka Fiican Fibromyalgia
Guji sawirka kore si aad ugu gudubto qormada xigta.
AKHRISO: 5 Jimicsiyada dhaqdhaqaaqa ee loogu talagalay kuwa qaba Fibromyalgia
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/5-øvelser-mot-isjias-edited.jpg?media=1648573622 400 682 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-06-19 15:06:182021-04-20 18:36:105 Jimicsiyada Wanaagsan ee Ka Soo Horjeeda Sciatica
Soo hel Ziem wuxuu leeyahay,
Jimicsiyada wanaagsan ee lagu sharraxay halkan, marka laga reebo dib -u -qaadista dhabarka ama “Cobra”. Layligani wuxuu dhabarka u qaloociyaa jihada xaqiiqdii aan u fiicnayn kuwa la halgamaya sciatica, sidaas darteedna uga dhigi kara khalkhalka mid ka sii xun sidii uu ahaa bilowgii.
9 Calaamadaha hore ee Cudurka Dheecaanada Badan (MS) Cudurka cagaha